Annaga - Shirkadda Iftiinka BeySolar
Maxay Beysolar uga duwan tahay kuwa kale ee soo saara iftiinka qoraxda
BeySolar Lighting Company Limited waxaa la aasaasay sanadkii 2006;Tan iyo markaas, BeySolar waxay ahayd tan ugu xirfadda badan uguna kalsoonaanta soosaarka nalalka LED-ka ee suuqa caalamiga ah ee alaabada iftiinka qoraxda iyo agabka.
Shenzhen BeySolar Lighting Co., Ltd waa shirkad fadhigeedu yahay Guangdong oo ku takhasustay bixinta nalalka waddooyinka qorraxda, nalalka beerta qorraxda, dabaysha & nalalka qorraxda, nidaamka soo saarista qoraxda yar iyo dhexdhexaadka ah, nidaamka iftiinka guriga iyo nidaamka bamka qorraxda iwm.
BeySolar waxay hadda leedahay warshado wax soo saar leh oo bedkeedu dhan yahay 8,000 mitir oo laba jibbaaran, oo leh aqoon-is-weydaarsiyo badan oo loogu talagalay soo saarista muraayadaha cadceedda, nalalka LED-ka, tiirarka, xakamaynta iyo qaybaha qaraabada ah.Shirkaddu waxay leedahay awood wax-soo-saar sannadle ah oo dhan 45,000 - 50,000 nalalka waddooyinka iyo nidaamyada qorraxda.Shirkaddu waa ISO 9001 shahaado.Alaabtu waa CE RoHS, SGS, SONCAP, TUV, COC, CQC, SABS, SABS, SGS shahaado.
BeySolar waxa ay soo ururisay koox shaqaale ah oo aad u wanaagsan kuwaas oo ka shaqaynayey warshadaha semiconductor ama meelaha laxidhiidha sanado badan, oo ay ku jiraan jimicsiga, thermology, sawir qaadista, makaanikada, elektiroonigga iyo takhasusyo kale.Waxaan la shaqaynaa Semiconductor Istitute ee Jaamacadda Beijing.Iyada oo la raacayo ruuxa shirkadda ee "daacadnimo, koox, shaqo iyo hal-abuurnimo", shaqaalaha BeySolar waxay si adag u shaqayn doonaan si ay u bixiyaan xalalka iftiinka qoraxda ee ugu wanaagsan, badeecadaha ugu tayada wanaagsan iyo adeegga iibka ka dib ee macaamiisheena.
Shahaadooyinkayada xagga tayada
Waxaanu ku takhasusay bixinta nalalka cadceedda oo tayo sare leh, nalalka beerta cadceedda, dabaysha iyo nalalka cadceedda isku-dhafan, taawarada nalalka cadceedda ee wareega, nidaamka matoorka cadceedda iyo qaar kale oo badan.
Khibradayada ayaa ah in aan siino tayada sare ee xalalka qoraxda ee la habeeyey qof kasta oo adduunka ku nool oo leh qiime jaban oo la awoodi karo.
BeySolar oo ah shirkad xirfad leh oo soo saarta nalalka LED-ka ayaa hadda leh warshadaheeda wax soo saarka leh oo dhan 8000 mitir oo laba jibbaaran oo ay weheliso aqoon-is-weydaarsiyo badan oo loogu talagalay soo saarista muraayadaha qorraxda, nalalka LED-ka, kontaroolayaasha iyo qalabka kale ee nidaamka.BeySolar waxay bixisaa xalal cadceed oo la habeeyey oo tayo sare leh qiimo jaban.
Dhirteenu waxay leedahay wax soo saar sanadle ah oo ah 15,000-20,000 nalalka iyo nidaamyada cadceedda.Shirkaddu waa ISO9001 shahaado ah oo dhammaan alaabooyinka cadceedu waxay u hoggaansamaan CE, RoHs, SGS SonCap shahaadooyinka.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah fadlan, ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho.Shaqaalaheenu waxay ku farxi doonaan inay kaa caawiyaan wax kasta oo aad u baahan tahay.